ပဲခူးမှာ ကလေးသူခိုးဆိုပြီး အမျိုးသားတစ်ဦး မှားယွင်းပြီး ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်တာခံရ
ပဲခူးမှာ ကလေးသူခိုးဆိုပြီး အမျိုးသားတစ်ဦး မှားယွင်...
1 ธ.ค. 2562 - 16:02 น.
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပဲခူးမြို့ ရွာသစ်ရပ်ကွက်မှာ နိုဝင်ဘာ ၃၀ရက် ညပိုင်းက အမျိုးသားတစ်ဦးကို ကလေးသူခိုးဆိုပြီး ရပ်ကွက်နေပြည်သူအချို့ရဲ့ ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့တာကြောင့် ပဲခူးပြည်သူ့ဆေးရုံမှာ ကုသနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဖြစ်စဉ်မှာ နိုဝင်ဘာ ၃၀ရက်နေ့ ညအစောပိုင်းက ကျောက်ကြီးစုရပ်ကွက်စီမံကိန်း ၅ လမ်းနေ ကိုငွေဖြိုးအောင်ဆိုသူအမျိုးသားဟာ စီမံကိန်း၄လမ်းရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်ကို ဝင်ရောက်ပြီးနောက် သူခိုးလို့ အော်ဟစ်ခံရတဲ့အတွက် ထွက်ပြေးရာက လိုက်လံဖမ်းဆီးကြသူတွေကြား တစ်ဆင့်တစ်ဆင့် ကလေးသူခိုးလို့ဆိုပြီး ဖြစ်လာခဲ့တာလို့ ဒေသခံအချို့ကပြောပါတယ်။
အဲဒီနောက်မရွာသစ်ရပ်ကွက်အရောက်မှာ လူတွေအကြားရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်လာခဲ့ပြီး ကျောက်ကြီးစုရပ်ကွက်နေ ကိုငွေဖြိုးအောင်ဟာ ကလေးသူခိုးဆိုပြီး လူအချို့ရဲ့ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်တာကို ခံခဲ့ရပါတယ်။
ကလေးခိုး အမှုတွေ မမှန်ဘူးလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ပြော
ကလေး လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးနေ့
'' ဖြစ်တာက ညပိုင်းကြီးဖြစ်တာ။ လူတွေကလည်း စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြတာဆိုတော့ တစ်ခုခု ဆိုရင်တော့ လူတွေက ဝိုင်းအုံလာမှာပဲ။ ကလေးခိုးတယ် မခိုးဘူးဆိုတောင် သူများအိမ်ထဲဝင်တဲ့ သူကတော့မှားတာပဲ။ ''ပဲခူးမြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးညွှန့်ရွှေကပြောပါတယ်။
ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး သမီးရည်းစားချိန်းတွေ့ရာကနေ လူအော်လို့ ထွက်ပြေးရာက အခုလို မှားယွင်းမှုဖြစ်ခဲ့တာလို့ ကျောက်ကြီးစုရပ်ကွက်မှာနေထိုင်သူအချို့က လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကလေးခိုးခံရတယ်လို့ အပြောခံရတဲ့ ကာယကံရှင်ကို ပဲခူးမြို့မ ရဲစခန်းမှာ ခေါ်ယူမေးမြန်းရာ ကာယကံရှင်ကမဟုတ်မှန်ကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့ပြီး အခင်းဖြစ်ပွားချိန်မှာ ကလေးဖြစ်သူဟာ မိခင်ဖြစ်သူ၊ အဖွားဖြစ်သူနဲ့အတူ ရှိနေခဲ့တယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့ကြောင်း ပဲခူးမြို့မ ရဲစခန်း၊ စခန်းမှူးဒုရဲမှူး နိုင်စိုးက မီဒီယာအချို့ကို ပြန်လည်ဖြေဆိုထားပါတယ်။
ဒီလိုမှားယွင်းမှုတွေမဖြစ်ပေါ်စေဖို့ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်က သတင်းစကားတွေကို ချင့်ချိန်ယုံကြဖို့ လိုတယ်လို့လည်း သူကဆိုပါတယ်။
ကလေး ၁၀၀ ကျော် မွေးစားထားတဲ့ မေတ္တာရှင်မေမေ လိမ်လည်မှုနဲ့ တရုတ်မှာ ထောင်ချခံရ
မတ္တရာ က ကလေး ရိုက်ခံရမှုအရေးယူ ခြင်း မရှိသေး
ဒါ့အပြင် လူမှုကွန်ရက်က ကလေးတွေခိုးနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းစကားတွေကြောင့် လူထုအကြား စိုးရိမ်မှုတွေများနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့် အခင်းဖြစ်စဉ်မှာ ဒေါသထွက်နေတဲ့ လူအုပ်ကြားက ကလေးသူခိုးလို့ အစွပ်စွဲခံရသူကို ခေါ်ထုတ်ယူဖို့တောင် ခက်ခဲခဲ့တယ် လို့လည်းသိရပါတယ်။
ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခံရတဲ့အတွက် ကလေးသူခိုးလို့ အစွပ်စွဲခံရသူ ကိုငွေဖြိုးအောင်မှာ လက်ရှိ ပဲခူးပြည်သူ့ ဆေးရုံမှာတက်ရောက်ကုသနေတယ်ဆိုတာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း ဆေးရုံအုပ်ဖြစ်သူ ဒေါက်တာရန်နိုင်မောင်က ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
'' ကလေးခိုးတယ်၊ကလေးတွေဆီက အမြတ်ထုတ်ပြီးရောင်းစားနေတယ်ဆိုတာက သတင်းတွေပဲသိရ တယ်။ ဒါက တပြည်လုံးမှာ ပြန့်နှံ့နေတာတွေလည်းရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့လို ဖြစ်အောင် နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်လှုပ်ရှားသူတွေရှိလိမ့်မယ် ။ ဒါတွေကို တိတိကျကျဖော်ထုတ်ပေးဖို့ ရဲတွေကို ပြောထားတာ လည်းရှိပါတယ်။ ပြည်သူတွေ အထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင် တမင်ဖန်တီးလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲ မြင်တယ်''လို့လည်း ကလေးခိုးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပျံ့နှံ့နေတဲ့အပေါ် ပဲခူးမြို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညွှန့်ရွှေကပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းက ပခုက္ကူမြို့နယ်အတွင်းကကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ကလေးတစ်ဦးကို ဝင်ရောက် ခိုးယူတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ရေနံချောင်း၊ မြစ်ကြီးနားစတဲ့ အခြားသော မြို့တွေမှာလည်း ကလေးခိုးတာတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေဆက်တိုက်ဆိုသလို ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလို သတင်းစကားတွေကြောင့် လူထုကြား စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ခုနှစ်အတွင်းကလည်း ကလေးသူခိုးလို့ဆိုကာ မှားယွင်း ရိုက်နှက်ခံရလို့ မကွေးမြို့မှာ အမျိုးသမီး တစ်ဦး ဝိုင်းရိုက် ခံရသလို မန္တလေး မရမ်းခြံသင်္ဘောဆိပ်မှာ အမျိုးသားတစ်ဦး လူဝိုင်းရိုက်ခံရလို့ အသက်ဆုံးတဲ့ ထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလို ကလေးတွေခိုးတယ်ဆိုတဲ့ ကောလာဟလတွေပျံ့နှံ့နေချိန် ကလေးသူခိုးလို့ မှားယွင်းရိုက်နှက်ခံရလို့ လူသေဆုံးရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာ မြန်မာအပါအဝင် အခြားသောနိုင်ငံတွေမှာလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ပဲခူးမှာ ကလေးသူခိုးဆိုပြီး အမျိုးသားတစ်ဦး မှားယွင်းပြီး ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်တာခံရ